မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] - Page 9
402 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 5th April 2010, 1:27 am
ET လည်း လာရောက်နှုတ်ဆက်ပါတယ် Virus ရေ
အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ လာနှုတ်ဆက်တာ နောက်ကျသွားတယ်
403 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 29th April 2010, 9:58 pm
အဲ... ( မြန် မာ စာ ရိုက် ၇ တာ သိပ် အ ဆင် မ ပြေ လို့ ပါ.... Admin အ ပေါင်း တို့ Eng လို ရိုက် ခွင့် ပြု ပါ )
Hello, Knock Knock, IT Resource Forum~~~
I'manew member here. So, WELCOME ME & ADD ME!! I'm specializing in IT field, studying IT and business management. Now, already 18 years old.
I like chatting, arguing, and reading. For IT, I feel I don't know much, but I'll try harder. So, please land me your hands to get the hang of IT field.
Oh yes, My name is Cherry.
Yours ever newest babie,
404 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 30th April 2010, 9:34 am
MITR မှ ကြိုဆိုပါ၏။
405 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 30th April 2010, 10:58 am
Both Of u Cherry & Swe .. welcome to IT field and Myanmar It Resource .. seek as much as knowledge u can from MMITR .. and try to serve ur Country
If any help .. u can ask $ƴǩǾ ... dunt ask me .. i know nth
406 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 30th April 2010, 5:09 pm
407 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 30th April 2010, 8:06 pm
I'm warmly welcomed.. Too happy~~~ I'll try to post as many as I can, not for spamming.
408 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 30th April 2010, 9:19 pm
ohh, I don't know how to greet beautifully in English.
so, Warmly Welcome sister.
Feel Free to share, discuss & ask with as.
409 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 30th April 2010, 9:27 pm
အော် .... Admin က Welcome လုပ် တာ နောက် ကျ တယ်...
တ မှတ် လျှော့ သင့် တယ်.... [You must be registered and logged in to see this image.]
410 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 30th April 2010, 9:35 pm
hee hee. perdon me.
I got trouble with my PC and I can't check the Post.
411 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 30th April 2010, 9:46 pm
[You must be registered and logged in to see this image.] YOU =.='
NOw, everything's in working condition?
412 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 30th April 2010, 10:15 pm
no, I can't do anything. When I try to do something, BSOD error happen.
Now, I'm using with the Ubuntu Live Version.
Windows is the worst OS over the planet. I'll never use it again.
413 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 30th April 2010, 10:38 pm
Welcome sis, haveanice time in MITR.
ps : bro $ƴǩǾ I have some print screen to show your Ma Hay Thi
414 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 3rd May 2010, 1:44 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-05-03
Hi everyone here. My name is Chikara Hikaru...
I'm so into IT and Game...
Especially Emulators (Due to poverty on consoles)
I think I'm sure that I'll be gaining extra knowledge from this forum.
So, I'll be looking forward for your precious knowledge on the forum...
415 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 3rd May 2010, 1:56 pm
သားသား magiceyez က water အနေနဲ့ ပြန်လာတာပါညာ.....
ူlogin ၀င်တော့ password လဲမေ့ [You must be registered and logged in to see this image.]
email ကလဲ ဟတ်ခံထားရတော့ [You must be registered and logged in to see this image.]
water လို့ register လုပ်ပြီးပြန်လာတာ
မင်မင်တို့ စိတ်ဆိုးရ၀ူးနော် [You must be registered and logged in to see this image.]
416 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 4th May 2010, 1:06 pm
တညျနရော : malaysia
ကျွန်တော့် နာမည်က ဇော်လတ် ပါ။ကြိုးစား လေ့လာနေဆဲ ပါပဲ။အခု လို မိတ်ဆက်စကား ပြောရတာ ဝမ်းမြောက် မိပါတယ်။ အားလုံး ကျန်းမာ ပါစေ။
417 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 4th May 2010, 2:18 pm
ကျနော်တို့ ဖိုရမ်ကို လာရောက်အားဖြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်
အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်ခင်ဗျ
418 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 4th May 2010, 2:56 pm
ကြိုဆိုပါတယ် ကိုဇော်လတ်.... ကျနော် တို့ forum မှာပျော်ရွှင်ပါစေ ဗျာ.......
419 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 8th May 2010, 6:30 pm
အဲ... Member နာ မည် တွေ မှတ် မိ တော့ ၀ူး
420 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 9th May 2010, 11:25 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-05-05
အားလုံးဘဲမင်္ဂလာပါ The Legend ပါခင်ဗျာ
421 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 9th May 2010, 5:49 pm
The Legend wrote: အားလုံးဘဲမင်္ဂလာပါ The Legend ပါခင်ဗျာ
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကိုဆာမူရိုင်းနဲ့ ခင်တယ်ဆိုတော့ Yangon FC ပရိသတ်လား။ ကျွန်တော်ကတော့ ရန်ကုန်ပရိသတ်ပါ။
422 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 10th May 2010, 6:52 pm
အင် နာ့နာမည်နဲ့ လာတာဘဲ ဘူလည်းဟင်
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေ MITR Forum မှာ ပျော်ရွှင်စွာလှည့်လည် သွားလာနိုင်ပါစေဗျာ ။
423 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 10th May 2010, 7:40 pm
အားလုံးကို အွန်လိုင်း မှာရောအပြင်မှာရော..
424 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 10th May 2010, 8:15 pm
ကို ထက်နိုင် ရေ... Sun 21 Jun 2009 တုန်းတည်းက နှုတ်ဆက်ထားတဲ့ နှုတ်ဆက်စာကြီးနော်. ဟိဟိ
425 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th May 2010, 8:46 pm
426 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 20th May 2010, 2:41 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-05-20
အားလုံးကလည်းခင်ကြပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတရ်ခင်ဗျာ။ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
427 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 20th May 2010, 3:12 pm
latpotter wrote: မင်္ဂလာပါ
ခင်ပါတယ်ဗျာ... ကျနော်တို့ဖိုရမ်ကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကို ကြိုဆိုပြီးတော့ ခင်ပါတယ်..
428 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 20th May 2010, 6:06 pm
ကို [You must be registered and logged in to see this link.] ရေ ..
ကျနော်ကို လဲ ခင်နော်......
429 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 20th May 2010, 7:13 pm
[You must be registered and logged in to see this link.] ရေ ကြိုဆိုပါတယ် ။
MITR မှာ ပျော်ရွှင်စွာ လှည့်လည် သွားလာပြီး မန်ဘာတွေအတွက် တန်ဖိုးရှိသော
ပို့စ်ကောင်းကောင်းများကို တင်ပေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါသည် ။
Last edited by samurai on 25th May 2010, 8:17 pm; edited 1 time in total
430 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 20th May 2010, 10:18 pm
ကျွန်တော်ကတော့ Eliza ပါ
အားလုံးကို ခင်မင်စွာဖြင့် နှုတ်ခွန်းဆက်သ လိုက်ပါတယ်
ဒီဖိုရမ်လေးကို သိနေပေမယ့် ဒီနေ့မှပဲ Register လုပ်ဖြစ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်လည်း တတ်နိုင်သလောက် ၀င်ရောက် ဆွေးနွေးပါ့မယ်
431 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 21st May 2010, 1:28 am
hay friend, welcome to our community.
432 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 21st May 2010, 8:05 am
eliza wrote: ကျွန်တော်ကတော့ Eliza ပါ
ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။ Eliza ရဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေကိုလည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
433 Hi to all members on 13th June 2010, 9:09 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-06-13
Hi to all members...! nice to meet you...
my name is Vicious.
434 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 14th June 2010, 12:59 pm
435 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 14th June 2010, 4:44 pm
Welcome to MITR.
participate as much as you can. Feel free to ask & share.
436 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th June 2010, 8:49 pm
ပညာရပ်တွေကိုအတူတူလေ့လာဖို့လူတစ်ယောက်တိုးလာတာကို ၀မ်းသာပါတယ်။
437 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th June 2010, 10:32 pm
438 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 2nd July 2010, 4:18 pm
ကျွန်တော်နာမည် " 72 61 74 "
I want to make c2hhcmUgYW5kIGxlYXJuIHRvZ2V0aGVyIA==
To improve our 01001001 01010100 00100000 01101011 01101110 01101111 01110111 01101100 01100101 01100100 01100111 01100101
[You must be registered and logged in to see this image.] ကြိုဆိုကြပါနော်......
439 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 2nd July 2010, 6:49 pm
Warmly Welcome Mr.RAT
440 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 2nd July 2010, 9:03 pm
441 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 2nd July 2010, 11:00 pm
ကျနော်တစ်ယောက်ပဲ လာရောက်နှုတ်ဆက်တာ နောက်ကျနေတယ်
442 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 5th July 2010, 3:09 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-04-05
443 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 5th July 2010, 5:54 pm
tawtharlay wrote: ကျွန်တော်နာမည်ကတောသားလေးပါ
မေးပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ သိသောက်ကို ကြိုးစားဖြေပေးပြီး မသိတာတွေကို သိတဲ့လူတွေဆီကနေတစ်ဆင့် ပြန်ဖြေပေးပါမယ်။
444 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 5th July 2010, 10:00 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-06-26
445 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 6th July 2010, 12:14 am
မင်္ဂလာပါ မဝေ ရေ
446 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 6th July 2010, 8:40 am
I am fresher.Nice to meet the Senior all member.I think this portal isaDevelopment for Myanmar IT field and me.Everyday, sing in this forum because he isavery nice .We are the PAL, development for MYANMAR IT RESOURCE
447 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 6th July 2010, 9:10 am
448 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 6th July 2010, 7:16 pm
cxitsoe wrote: Hi
well, let's contribute as much as we can.
let's collab to create the IT Portal for MM PPL.
449 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 17th July 2010, 11:17 pm
ကျွန်တော်ကတော့ Crystal Clear လို့ခေါ်ပါတယ်
အားလုံးကို ခင်မင်ခွင့်ရပြီး နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဆွေးနွေးခွင့်ရချင်ပါတယ်
450 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 17th July 2010, 11:22 pm
ကျတော့် နာမည်က နေဦးသစ်ပါ
ညီအကိုမောင်နမများလိုအပ်တာ ရှိရင် ကျတော်က
ကွန်ပျုတာပိုင်းလေး တွေ ကိုလည်း မသိဘူး သေချာလေး နားလည်အောင်ပြောပြပေးကြပါနော်
451 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 18th July 2010, 5:28 pm
မင်္ဂလာပါ ကိုနေဦးသစ် / Crystal Clear
MITR နည်းပညာဖိုရမ်က နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ
452 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting]